India: Kwapera gore, iyo yeCRPF vafira vakafa yakatangwa muPulwama | India Nhau - Tamban RELAY
India: Kwapera gore, iyo yeCRPF vafira vakafa yakatangwa muPulwama | India News
LETHPORA: Nhengo makumi mana dzeCRPF dzakaurayiwa mukuratidzira kwehugandanga mukati Pulwama Gore rakapfuura, chiyeuchidzo kumisasa yeLethpora musasa yakapembererwa neChishanu mumhemberero yakatarwa uye yemanzwiro.
Chirangaridzo chakanyorwa nemazita evarwi makumi mana pamwe nemifananidzo yavo nemota Central Reserve Mapurisa - "Seva naNishtha" (sevhisi uye kuvimbika).
Umesh Gopinath weMaharashtra, uyo akatanga rwendo rwemakumi matanhatu neshanu km kuti asangane nemhuri dzemhuri makumi mana, akaunganidza ivhu remisha yavo muhushi ndokunopa kuCRPF kumhemberero idzi.
Musasa weLethpora uri padhuze nepapo Jaish-e-Mohammed Gandanga Adeel Ahmed Dar akatyaira akaputika jeep mune imwe motokari yemotokari yakatakura vashandi vekuchengetedza nzira kuJammu-Srinagar nzira kubva kuLethpora kuenda kuPulwama munzira cashmere Valley.
Vanenge vese vapomeri kumashure kwegore rapfuura mabhomba aurawa. Wazvino, Qari Yasir, uya anonzi mutungamiri weboka revapambi veJaish-e-Mohammad, akaurayiwa mwedzi wapfuura.
"Tinorwa nesimba rakawanda pakusangana nemagandanga uye ndosaka takakwanisa kubvisa vatungamiriri veJaish-e-Mohammed nekukurumidza mushure mekurwiswa kwedu vejaya," akadaro director wekuwedzera we CRPF, Zulfikar Hassan.
Akaradzika rwodzi rwejaya pachiitiko chakavakirwa neCRPF panzvimbo yekudzidziswa.
Hassan akataura kugutsikana nekuferefeta kuri kuenderera mberi na National Investigation Agency uye akataura kuti hapana dombo rakasiiwa kuti ririritire mhuri dzevafira.
Kunyangwe akaramba kudoma matanho ekutora nguva yekufamba kwehondo mushure mekurwiswa kwaFebruary 14, 2019, vakuru vebazi rezvekudzivirirwa vakazivisa kuti boka remauto raive zvino mukubatana nemamwe mauto e chengetedzo uye mauto.
NeChishanu, pakanga pasina mafambiro evashandi vekuchengetedzeka vanoenda pamugwagwa mukuru, sezvo maive nemishumo yekuti vatevedzeri vanokwanisa kurwisa nekuratidzira zuva rekucherechedzwa kwegore. wokupedzisira.
"Isu tinotevera maitiro ehumwe anoshanda mutsamba nemweya kuona kuti chimwe chinhu senge gore rakapera hachidzokororwe." Vanhu vange vachidyidzana mune izvi, "akadaro jawan kubva kuCRPF."
Kuchengetedza iyo nzvimbo yaive nemotokari yakazara nezviputika yaive yakafukidza bhazi rakatakura vashandi veCRPF, vakati zvakange zviri mumabasa kubvira mambakwedza kuona kuti basa rakaitika pasina zvaitika.
Kubvira gore rapfuura kurwiswa, iyo Hushumiri hweMukati yakanga yabvumira CRPF kuendesa mauto ayo nemhepo kuti vadzivise mukana wekurwiswa kwakadaro.
Maitiro ekuverengesa mota mota dzakatakura mauto dzakawedzera nekukurumidza uye mota dzemhando yepamusoro-zhinji dzakaonekwa mumigwagwa yakatakura maaya.
Belgium: Jean-Jacques Coppée: "Ndiri kunzwisisa nei muchinda ...
India: Delhi HC kunzwa chikumbiro pane "zera ...
Iyo French Dispatch: turera yeiyo itsva And Anderson
Belgium: Mhumhi Noëlla inotorwa mifananidzo mune masikati makuru
Belgium: Jean-Jacques Coppée: "Ndinonzwisisa kuti nei muchinda aigona kunge akapwanyika"
India: Delhi HC ichanzwa chikumbiro nhasi pane